Haddii aad tahay user khibrad Android, waxaa laga yaabaa in aad leedahay aqoon fiican u ROM. Faham wanaagsan oo ku saabsan ROM ka dhigi doonaa inta badan aad telefoonada Android.
Qeybta 1: Waa maxay ROM Qeybta 2: Top 5 ROMS Android Qaybta 3. Top 5 Android ROM Maareeyayaasha Qeybta 4: Sida loo maamulo Manager ROM Apps u Android on PC
Qeybta 1: Waa maxay ROM
Read xasuusta oo kaliya (ROM) waa dhexdhexaad ah computer gudaha kaydinta in kaydiya xogta si joogto ah on Personal Kombiyuutarka ama wax qalab kale oo elektaroonik ah sida iPad iyo casriga ah. ROM aan la beddeli karaa; waa joogto ah iyo kuwa aan degganeyn. Iyadoo habkaani, xusuusta qaban karaa xataa marka ay korontada ka gees ah iyo wan weyn taas oo kacsan iyo xogta waxaa sidaas awgeed laga badiyay mar kasta awood u tago. ROM si joogto ah isku dhafan ee kumbiyuutarada la af barnaamijyada loo baahan yahay in dheeraad ah laga bilaabo kombiyuutar isaga u gaar ah, waa lagama maarmaan u boot-up, fulinaya iyo wixii soo baxayey hawlaha waaweyn ee, oo haysta barnaamijyada ama tilmaamaha software muhiim u ah hawlaha la kombiyuutarada shakhsi. Kombiyuutarada shakhsi badan ayaa chips ROM ku yaal motherboards, halka qaar ka mid ah ay leeyihiin guddiyada ballaarinta. Chips waxay qabtaan geedi socodka computer aasaasiga ah sida: Nidaamyada saarka talooyin asaasiga ah (BIOS), akhriska iyo wax qoridda inay qalabka durugsan, maamulka xogta asaasiga ah iyo maamulka software.
Qeybta 2: Top 5 ROMS Android
CyanogenMod waa ROM Android ugu caansan ee dunida maanta. Ilaa Waa in attune ka badan hal milyan oo dadka isticmaala diiwaan gashan oo dhan oo rukummada ah dunida. CyanogenMod ayaa caan ayaa waxaa loo aanaynayaa in ay la heli karo in gebi ahaanba ku dhowaad dhammaan qalabka android, wixii intaa; waxay bixisaa muuqaalada weyn badan oo maqan on ROMS kale android rasmi ah.
CyanogenMod isku daraa dhammaan aragnimo Android la fara badan user jeeda goobaha ogolaada in user si uu u sameeyo isbedel badan oo ay ku jiraan yareysey kala duwan rukhsadda App ee, helitaanka xogta, iyo sida batteriga u eg in xaaladda telefoonka gacanta bar.
Kuwa soo socda waa qaababka ugu muhiimsan ee CyanogenMod:
• Kartida aad u astaysto dekedda screen guriga toobiye ah
• Advance guddi codka
• Sare iyo fursadaha launcher ballaaran
• Inta badan app camera hagaagayo
• gacanta theme Advanced app iyo soo bixi mawduucyada
• Customization bar Status
• tuuryo screen Lock
• qalabka Privacy
• reply Fariin Quick
• Tethering iyo Wi-Fi kulkulul
• Saacadaha Deggan Sida hab Do-ma-dhibi ee macruufka
• Wi-Fi uma shaqeeyo sida la filayo.
• Waxa aanu qaadan wax ka badan hal sawir halka ka hawlgala camera.
Mararka qaarkood ma maqli karaysaane si cad dhexe ee yeedho.
MIUI waa caadadii ugu caansan Android ROM labaad. Its caan ayaa waxaa loo aanaynayaa in ay si qurux badan loogu tala galay macruufka-sida interface iyo qaababka kale ee kala duwan. MIUI markii hore horumariyo Shiinaha iyo ka dib turjumey luqado badan oo caalami ah.
Features ee MIUI
• Toosh Advanced
• Waa hagaag loogu talagalay qoraalada app
• updates Weather app
• qaababka amniga iyo asturnaanta badan
• mawduucyada gacanta Advanced
• jawaab Fast
• maarmo oo dhamaystiran nidaamka Operating Android oo dhan (OS)
• launcher kala duwan sida ADW hore Launcher 7, Tag Launcher kuwo kale.
• Isticmaal fayl in uu abaabulo files
• batari Good
• MIUI ayaa app khaanad jirin sida iPhone
• Arjiyada MMS ma yihiin kuwo aad u hufan
3. khayaano Android
Tani waxa ay mid ka mid ah caadadii ROM Android caanka ah ee suuqa, ay AOSP waxaa markii hore loogu si la mid ah la Cyanogenmod laakiin waxa uu is beddelay dhaqaaqayo in ay Jelly Bean 4.2.1. Waxaa hadda laga heli karaa qalabka Nexus iyo OPPO. Its version dambeeyay waa Android 4.4.2 KitKat khayaano Android caadadii ROM.
Features ee khayaano Android
• hab Hybrid gelineya inaad ku beddelato mid ka mid casriga ah, kiniiniga, alifbeetada user interface in kale.
• engine Hybrid kuu ogolaanayaa inaad si ay u qeexaan DPI ku salaysan codsi kasta.
• engine Hybrid kuu ogolaanayaa inaad si ay u dejiyaan midabo caado u lahaayeen barnaamijyadooda oon suuragelinayo in aad u dhigma farriimaha iyo qataarro menu la midabka ah ee codsiga aad ku jirtid.
• Waxay leedahay gacanta ku goobeed iyo Hola.
Faa'iidooyinka khayaano Android
• batari Long waarta
• Full kala duwan ee ART oo taageera codsiyada socon
• si fiican u horumarsan iyo hormartay doorasho hidi si ay u dejiyaan ugu badnaan inta jeer processor, ugu yaraan ama baahida
Qasaaraha Android khayaano
• hawlgal oo aad u adag
• codsiyada soo bixi rakiban yihiin si ay qayb xogta ee xasuusta gudaha ah, taasoo ka dhigeysa meel yar xogta aad.
• khayaano Android waa in dheeraad ah "laayeen dhiig" ie deganayn iyo gaabis barbar Cyanogenmod Android
Inkastoo AOKP waa Comer cusub ee suuqa, waa ka mid ROM Android ugu caansan ee suuqa maanta. Waxay leedahay sifooyinka la mid ah la khayaano Android in laguu suurogeliyo in aad astaysto interface ka mid ah qalabka Android aad. AOKP ayaa helay taageero sababta oo ah dar-ku iyo qalabka ka maqan ee tartan weyn oo sida Cyanogenmod Android. Its qoraalkii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah Galaxy S3, Ogow Galaxy II, iyo Motorola Droid 3 iwm
Features ee AOKP
• Kuu ogolaanayaa in aad beddesho midab ah oo ka mid ah shaashadda furayaasha jilicsan.
• U ogolow in aad bar xaaladda oo daahfuran maraan oo ay la socdaan farriimaha LED.
• Dib-u-size bar navigation ah
• qoofalan screen Lock
• Samee falalka saxaafadeed dheer in waxyaabaha in si degdeg ah goob menu.
• jeeda gaadhsiin customizable
• fasax Access
• taageero qalab Limited
• No profile muuqaalada
• No hidi-goobeed Launcher fulinta kasta oo kale oo nooca isku midna
• No download dhexe daayo guul
ICS Slim ayaa ROM nadiif ah kartoo ku salaysan 4.0 Ice rooti qaylo, inkasta oo ay ROM waa la kala xajmi iska jaro, waxa ay leedahay badan qaababka aad rabto. Iyadoo ROMS badan ayaa isku dayaysa inay ku dari on qaababka badan iyo fursadaha tweaking, design Slim ICS uu awood u leeyahay in ay hoos u jar baruurta in ay lagama maarmaanka u dhashay idiin siinayo rakibo ugu dhaqsiyaha badan iyo ICS nadiif ah. ICS Slim ayaa hadda laga heli karaa qalabka Android badan oo sida Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy S3 oo ugu dambeeyay ee Samsung Galaxy S4.
Features ee Slim ICS
• ROM AOSP caadadii ku salaysan
• In ka badan shan luuqadood oo kala duwan
• iftiinka Well sare Launcher
• A taariikheed iyo cimilada widgets in bar screen log
• Kuu ogolaanayaa in aad qaadato darbo screen isticmaalaya kartoo bar navigation
Faa'iidada ICS Slim
• ROM yimaado qaab siman
• Light ROM miisaanka
• Slim ICS waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo Advanced Slim Settings (dameer).
Qasaaraha Slim ICS
• No iib ah bloat
• U baahan gurmad xogta qalab aad.
• U baahan kabashada ClockworkMod in lagu xiro in aad casriga Galaxy
• In marxaladda horumarinta iyo ka maqan waxyaalo badan feature
Qeybta 3: Shan Android Apps Manager ROM
Isticmaalka ROM Android u baahan rakibo wax ku ool ah iyo maamulka. Tani mararka qaar waa shaqo adag, waxayna u baahan tahay wax badan oo aad dadaal. Tababaraha ROM ee Chine Android awood aad u fududayn lahaa hawshan. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si loo soo dajiyo noocyo kala duwan oo ROMS oo iyaga si fudud u maareeyaan. Intaa waxaa dheer, waxa ay ku siin karaan dib, ay heli karaan in la soo celiyo qalab aad iyo aad u rakibi clockwork kabashada Ducooyinkii.
Tababaraha ROM 3.4 / 5 Lacag & free
Rufyaan aan ROM 4.3 / 5 Free
ROM qalabeed Manager Pro 4.7 / 5 Lacag & free
Tababare 1. ROM
Tababaraha ROM waa mid ka mid ah tababaraha ROM ugu isticmaalo Android. Waxa loo isticmaalaa Android rooting, iyo waxaa jira in ka badan hal milyan oo downloads ilaa iyo tirada sii kordhaya maalinba maalinta ka. Codsiga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad baxdo iyo rakibi ROMS aad kaydinta telefoonka gacanta awoodda iyo flash kabashada clockwork sida ClockworkMod kabashada taabto.
Features tababare ROM
A dhisay-in gurmad server
Options xitaa faylasha
Faaidaysan Yar IU sida asalka cusub iyo Android dhaceen
Rakibaadda Automatic soo kabashada clockwork Touch
Faa'iidooyinka Tababaraha ROM
Mangers ROM 5.8.0.8 version kuu ogolaanaya in aad si fudud ku wareejiso gurmad si aad u computer shakhsi iyada oo ah Wi-Fi.
Tababaraha ROM ayaa dib cusub ilaa in xogta de-tus ka dhexeeya version kala duwan oo gurmad ah.
Waxay leedahay raad raac si dhakhso ah.
Waxay leedahay raad raac fiican iyo soo celiyo.
Waxa uu awood u leeyahay u iftiimiyo ROMS caadadii.
Qasaaraha Tababaraha ROM
Waxaa jira halis ah in qalab aad laga yaabaa leben, function mar dambe ka dib markii la rakibey ee Custom ROM. Tani waxay dhacdaa marka aad rakibo waxaa si khaldan sameeyey, ama meesha aad ku rakibi ROM qalad ah ama kama 'oo kaliya xukun jecel.
Sidoo kale waxaa jira halis ka iman karta in sameeysa ah ayaa laga yaabaa in niyadda jirran. Sameeysa ayaa ku karsan kartaa codsiga furin aad aqoon la'aan.
Download Manager ROM ka Google Play Store >>
App Tani horumariyo oo maamula file goobta marti Goo.im. Sida laga soo xigtay app rasmiga ah ee Goo.im, horumarinta Goomanager ku qaatay xaddi badan oo waqti beddelo server si ay si toos ah quburada files ROM, xogta la qabsado, oo waxaad ka samaysaa nidaamka update Ota aan sixiddiisa files cad ama sameynta hawlaha kale daalin. ROMS caadadii qaarkood waxay leeyihiin Goomanager mar hore lagu rakibay.
Features ee Goomanager
Browse, baadhidooda iyo soo bixi badan oo si toos ah codsiyada ka qalab aad sida app baakadaha Google, kernels iwm
Hel updates ugu dambeeyey ka horumarinta kala duwan
Update Advanced Apps baakadaha
Download si toos ah
Heshaa updates style Ota
Goomanager taageertaa updates ROM kordhiyo u baakadaha ROM isku xig xiga.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo bixi Google Apps sida Gmail, dukaanka play mid ah kuwa kale.
Goomanager kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi iyo iftiimiyo ROMS cusub iyada oo soo kabashada.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo bixi yaruna kuu ogolaanaya inaad u iftiimiyo qalab mobile.
Waxa aad ka caawisaa in ay ROMS flash.
Waxay kaa caawinaysaa inaad ku beddelato ROMS.
Waxa ay u ogolaataa in aad joogtid dib-u-taariikh iyo xog iyada oo farriimaha.
Waxay leedahay nidaam fantastic fudud u ogolaanaya in ay ku dhiirigelinayaan in geliyaan ROMS ay la sooca ah.
Its API Tababaraha download waa buggy on Gingerbread.
Flash aan taageeraa rakibidda Open Recovery Script.
Waxaa ka maqan khasnado, soo kabashada, ama amarka si ay u taageeraan dib u soo kabashada.
Download Goomanager ka Google Play Store >>
3. rufyaan aan ROM
Pim aan ROM waa app ROMS Manager ugu dambeeyay ee Android la badan oo kala duwan Android uga faaidaysan, mawduucyada iyo sifooyinka waxaad dalban kartaa mid ka mid ah liis dhexe. By fudud biligleynaya Pim aan ROM sida ROM kasta oo kale, waxaa kuu ogolaanaya in aad si joogto ah u codsan tweak kasta oo aad ka fekeri karto mid ah. Waxay u baahan tahay xididka, wuxuuna ka shaqeeyaa dhammaan qalabka iyo ROMS.
Features ee rufyaan aan ROM
Madal uga faaidaysan Audio
Back la faaidaysan keydinta batari
Faa'iidooyinka Pim aan ROM
Advanced oo dhaqso dhirta internet
Better JPG tayada image la qaraarada awood sare
Duubo awood sare ka camera
Si dhakhso ah u wad
Gacanta ku taabto Tixgelinta
Mawduucyada dheeraad ah
Qasaaraha Pim aan ROM
Waxaa weli cusub oo u baahan dib ilaa qalab aad hor inta aadan isticmaalin codsiga.
Waxaa jira halis ah musuqmaasuqa xogta ku dhacdo ah xiritaanka mobile nijaas.
Marka Nexus 7 socda app, music play iyo Bluetooth kala sooc lahayn dami iyo jeer.
• Mararka qaarkood calanka u widgets cimilada la waayay, gaar ahaan marka Nexus 7 codsiga orodka.
Download rufyaan My ROM ka Google Play Store >>
By degsado file yar Delta tusaale ahaan 10MB, codsiga Cyandelta ka updater kuu ogolaanaya in aad si aad u cusboonaysiiso OminRom ama ROM CyanogenMod. Tani waxay awood kuu siinayaa inaad cusboonaysiiso ROM si fudud adiga oo isticmaalaya internet gaabis ah oo raqiis ah sida 2G ama xiriir 3G.
Features ee Cyandelta Updater
Tallaabooyin ammaanka xoojiyay meel.
Rakibnay la zip soo kabashada.
DeLTAS hufnaan Sare.
Faa'iidooyinka Cyandelta Updaters
• La socodsii OmniROM ama CyanogenMod ay si fudud u soo degsado file Delta yar
• Codsiga Simple
• si aad u wanaagsan shaqee xitaa marka aad xogta aan xad lahayn
• download yar
• Download ku ROM CM buuxa oo aan xad laheyn.
Qasaaraha Cyandelta Updater
• updater Cyandelta xaddidaya nighties u dhexeeya safafka 5-15 MB soo degsado kaliya files kala duwan ee.
• Waxay qaadataa waqti dheeraad ah marka degsado iyo ku rakibidda.
• Waxaa culeys dheeraad ah oo ku server.
Download Cyandelta Updater ka Google Play Store >>
5. ROM qalabeed Pro
ROM qalabeed Pro waa mid ka mid ah barnaamijyadooda Tababaraha ROM Android badi la isticmaalo maanta. Waxay isku daraa oo dhan barnaamijyadooda xididka weyn, oon kuu oggolaadaan in aad samayn Customization aad u badan si aad ROM sida animations boot, noocyada, astaanta, processor dhigay, ku dar Blocker, iyo tababaraha Auto-kulan oo ka mid ah kuwa kale.
Features ee qalabeed Pro
Gurmad Dufcaddii iyo soo celinta Chine
Jadwalka hayaan in uu ordo waqti cayiman
Chine aad ee kaabta in WordPress
E-mail-ada aad u saaxiibadaa
Kaabta / celin qoraalka, buugaagta, xisaab iwm
Xayiraadda / nidaam Dhalaali oo Chine user
Faa'iidooyinka qalabeed ROM Pro
Tababaraha app ah ee loogu tala gurmad
Chine badan oo
Maamul iyo soo celin hayaan Android
Ha ogolaan in xogta, iyo xaaladda batari
Qasaaraha qalabeed ROM Pro
• qaababka qaarkood sida goobaha processor waa dhacsan.
• Isticmaalka ugu bedbeddelayay font xarfaha qaarkood wada Galiyo.
• File browser ma aha sida wax ku ool ah iyo sida Root Explorer hufan.
Download Pro qalabeed ROM ka Google Play Store >>
Qeybta 4: Sida loo maamulo Manager ROM Apps u Android on PC
Marka aad isticmaalayso telefoonka ah Android, waxaad kala soo bixi doonaa, rakibi, iyo uninstall barnaamijyadooda. The Chine ee aad taleefan ka heli doono iyo aad u badan. Chine Qaar ka mid ah ayaa si dhif ah loo isticmaalo, iyo qalab ka caawin doonaa in aad iyaga si dhakhso ah ay u maareeyaan. Qaybtan, waxaan soo bandhigi doonaa sida loo maareeyo barnaamijyadooda Tababaraha ROM Android on your computer la Wondershare MobileGo for Android.
1. Download Wondershare MobileGo for Android iyo rakibi on your computer.
2. Fur software ah oo taga si Google Play dukaanka app.
3. Raadi Tababaraha ROM aad jeceshahay iyo dajiyo.
4. Riix App galeeysid bidix si ay u muujiyaan suuqa kala maamulka app. markaas, waxaad ku rakiban kartaa, uninstall, share iyo dhoofinta maamulayaasha ROM Android ama ku dhaqaajiyaan si ay kaarka SD.
> Resource > Android > Top 10 ROMS Android oo Android ROM Maareeyayaasha